Ganacsade Soomaali ah oo abaal qaali ah lagu gudoonsiiyay dalka Maraykanka | Burconews
Ganacsade Soomaali ah oo abaal qaali ah lagu gudoonsiiyay dalka Maraykanka
October 16, 2018 - Written by burconews 1
Ganacsade Soomaaliyeed ayaa sannadkan nasiib u yeeshay hanashada abaal marinta sannadka 2018-ka ee ganacsadaha ugu waxqabadka wanaagsanaa gobolka Minnesota, waana abaal marin la guddoonsiiyo dadka ka soo jeeda qaaradda Afrika ee guulaha ganacsi ka gaara gudaha Mareykanka.
Cabdiraxmaan Kaahin ayaa ah milkiilaha dhowr maqaaxi oo lagu sameeyo cuntooyinka Africa iyo noocyo kale oo ay ka mid yihiin cuntooyinka Turkiga.
Noocyada raashinka ee loo yaqaanno cunto Soomaaliga oo isugu jira sabaayad, Sambuus, shaah iyo waxyaabo kale ayuu sheegay in ay dad jinsiyado kala duwan leh ka cunaan maqaayadihiisa.
Wayeysi uu Cabdiraxmaan Kaahin Siiyay BBC-da ayuu ku sheegay sida uu ugu faraxsan yahay in ganacsigiisa loo aqoonsaday kii ugu wanaagsanaa ee sannadkan ka howlgalayay gobolka Minnesota, tartankaas oo uu uga guuleystay meherado kale oo loollan galinayay.
“Waa dhaqan ka jira waddankan, sannad walbana waxaa la qiimeeyaa cidda mudan abaal marinta ‘African Awards’ la yiraahdo ee la siiyo dadka ugu ganacsiga fiicnaa sannadka. Arrintanina waxay soo socotay 7dii sano ee la soo dhaafay” ayuu yiri.
Abaal marintan oo dhinacyo kala duwan laga eego ayaa lagu bartilmaameedsadaa shakhsiyaadka iyo shirkadaha dadaalka ku bixiyay qeybaha kala duwan ee adeegga bulshada sida; Ganacsiga, Aqoonta, Fanka iyo arrimaha bulshada.
Shacabka gobolka oo aan ku koobneyn Afrikaanka oo kaliya ayaa u codeeya ganacsiga ugu haboon ee abaal marintaasi la siinayo.
Cabdiraxmaan oo dareenkiisa la wadaagay wariyaha laanta Afsoomaaliga BBCda ee dalka Mareykanka ayaa yiri “abaal marintani waxay dhiirri galineysaa in sare loo qaado adeegyada kala duwan ee loo sameeyo shacabka”.
Tartankan ayaa waxaa maalgaliya shirkado kala duwan oo ka howl gala waddanka Mareykanka, kuwaasoo ujeedkoodu uu yahay inay aqoonsadaan dadka Afrikaanka ah ee dadaalka dheeriga ah muujiya.
Ganacsadahan ayaa noo sheegay in hadda ganacsiga ay sameeyaan dadka ka soo jeeda Africa ay daneynayaan shirkadaha ugu waaweyn dalkaas.
“10 sano ka hor arrimahan cid daneyn jirtay ma jirin, haddana abaal marintan waxaa kharash gareeyay shirkadda taleefannada iyo shirkadda Target ee dhanka ganacsiga. Labadan shirkadoodba waxay ka mid yihiin kuwa ugu waaweyn dalka Mareykanka” ayuu yiri Cabdiraxmaan.